Achọghị m ịnụ Akụkọ Gị | Martech Zone
Tuesday, August 28, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Oge maka ụda. Okwu ohuru ohuru na mgbasa ozi mgbasa ozi na ebe ahia di ịkọ akụkọ. Anyị ekenyela ụfọdụ nkọwa nkọwa na ịkọ akụkọ banyere ụlọ ọrụ na-ekwu okwu na ịkọ akụkọNa m nwere mmasị na ịkọ akụkọ. Site na ndị na-ege ntị ziri ezi, ọ dịghị ihe dị mma karịa akụkọ dị mma iji jikọọ na ndị na-ege gị ntị.
Ma anyị na-eji ihe ugbu a akụkọ maka ihe niile. Logos ga-akọ akụkọ. Sdị ga-akọ akụkọ. Ndị na-ese ihe osise aghaghị ịkọ akụkọ. Infographics ga-akọ akụkọ. Ebe nrụọrụ weebụ gị ga-akọ akụkọ. Gị blog post nwere ịkọ otu akụkọ. Ngwaahịa ahụ ịkọ akụkọ. Ihe ngosi a gha ekwuputa akuko.
Ezuola na akụkọ ọjọọ, ugbua! Naanị n'ihi na ụfọdụ guru ebe ekwuru banyere ịkọ akụkọ apụtaghị na ọ bụ atụmatụ kwesịrị ekwesị maka gburugburu ahịa na ndị na-ege ntị. Ọ na-echetara m ọnọdụ na Life of Brian… the Akpụkpọ ụkwụ bụ ihe ịrịba ama!
Dị nnọọ ka akpụkpọ ụkwụ ahụ abụghị ihe ịrịba ama site na Brian, ịkọ akụkọ abụghị azịza nye nsogbu ahịa gị niile. Amaara m na ụfọdụ ndị folks na-efe ahịa ahịa a… mana were ndụmọdụ ha were nnu. Ha amaghi ngwa ahia gi, ulo oru gi, ego gi, ihe oma na ọghọm ya, na eju anya - ha amaghi akuko ndi ahia gi.
Oge ụfọdụ, achọghị m akụkọ - anụrụla m akụkọ ahụ.
Oge ụfọdụ, achọghị m ịkọ akụkọ - achọrọ m ịdebanye na ntanetị.
Oge ụfọdụ, achọghị m akụkọ - anaghị m enwe oge ige ntị.
Oge ụfọdụ, achọghị m ịkọ akụkọ - achọrọ m ịhụ njirimara ya.
Oge ụfọdụ, achọghị m ịkọ akụkọ - achọrọ m ịma uru ọ bara.
Oge ụfọdụ, anaghị m achọ akụkọ - Amaara m ndị ahịa gị ma chọọ otu ngwaahịa ahụ.
Oge ụfọdụ, achọghị m ịkọ akụkọ - achọrọ m ịhụ ihe ngosi.
Oge ụfọdụ, achọghị m ịkọ akụkọ - achọrọ m ịnwale ya.
Oge ụfọdụ, achọghị m ịkọ akụkọ - achọrọ m ịma otu ole.
Oge ụfọdụ, achọghị m akụkọ - achọrọ m ịzụ ya.
ịkọ akụkọ siri ike ma chọọ ezigbo talent iji mepụta ihe osise na ederede, onyonyo ma ọ bụ vidiyo iji hụ na nghọta. Oge, ụda ahụ, ihe odide… niile iberibe kwesịrị ịnọ ebe maka akụkọ na-arụ ọrụ na imetụ ndị na-ege ntị dị iche iche ị na-agwa okwu aka.
Ọnwa ole na ole gara aga, emere m nyocha na ngwaahịa nke gosipụtara idozi nsogbu anyị na onye ahịa nwere. Amaara m ego ole onye ahịa ahụ na-akwụ. Amaara m ego ole nsogbu ha na-efu ha. Amaara m ego ole m dị njikere ịkwụ iji wepụ okwu a. Saịtị enweghị niile ozi ndị dị mkpa, ma ọ bụghị na m nwere ike debara aha ozugbo na e I ma m nwere debanye aha maka a ngosi.
Mgbe m debanyere aha maka demo, anatara m oku tupu ị tozuo ebe a jụrụ m ọtụtụ ajụjụ. Mgbe a obere ajụjụ, m mere mkpesa na dị nnọọ jụrụ maka ngosi. Aghaghị m ịkwụsị ịza ajụjụ ndị ahụ. Ozugbo emere, m haziri ngosi. Otu ụbọchị ma ọ bụ karịa, enwetara m oku maka ngosi ahụ, onye na-ere ahịa ahụ mepere oche omenala ya maka nke m. persona wee malite ịgwa ndị akụkọ.
Agwara m ha ka ha kwụsị. Ọ jụrụ.
Ajụrụ m ma ọ bụrụ na anyị ga-eme ihe ngosi ahụ, ọ kwadoro ajụjụ ahụ. Ya mere, agwara m ya ka onye njikwa ya kpọọ m ma kpọọ m. Enwere m nkụda mmụọ ugbu a. Onye njikwa ya kpọrọ m wee gwa ya ka ọ gosipụta sọftụwia ahụ, na-akọwa na ọ bụrụ na ọnụego ahụ dị na mmefu ego m ma ọ bụrụ na sọftụwia ahụ dozie nsogbu ahụ, adị m njikere ịzụta.
O gosiri m ihe ngosi. Ọ gwara m ego. Emere m nzụta ahụ.
Na njedebe nke oku ahụ, o kwetara na ya ga-alaghachi wee gbanwee usoro ire ahịa iji soro ụlọ ọrụ dịka nke m.
Ọ bụ ezie na enwere m ekele maka ọrụ niile dị ịtụnanya ndị otu ya ga-eme iji nyochaa mmeri / ọnwụ ndapụta, mepee onwe onye, ​​dee akụkọ na ndị ahụ, setịpụ usoro ị ga-eji mee ihe ma zụọ m akụkọ nke na-akpali akpali na m ga-azụta… M achọghị ya ma ọ bụ chọọ nke ọ bụla. Enweghị m oge maka akụkọ. Achọrọ m azịza ya.
Ewerela nke a n'ụzọ na-ezighi ezi, akụkọ nwere ọnọdụ ha n'ahịa. Ma ịkọ akụkọ abụghị nsogbu nke usoro azum ahia. Offọdụ ndị ọbịa na saịtị gị anaghị achọ akụkọ… ha nwedịrị ike ịda mba ma gbanyụọ ya. Nye ha nhọrọ ndi ozo.
Ugbu a ka oge agwụla, nke a bụ akụkọ ọma nke ị ga-achọ ịgụ… enyi m (na onye ahịa), Muhammad Yasin na Ryan Brock lelee anya n’ogologo akụkọ ihe mere eme nke ndị nyere akụkọ ziri ezi n’oge kwesịrị ekwesị. Gụọ ka ha na-enyocha ụwa nke mgbasa ozi mmekọrịta na oge dijitalụ ma na-ele anya n'oge gara aga iji mụta na mgbe a bịara n'ịkọ akụkọ, e nwere ọ dịghị ihe ọhụrụ n’okpuru anyanwụ.
Bulie otu oyiri nke Ọ dịghị ihe ọhụụ: akụkọ na-adịghị mma banyere akụkọ akụkọ na mgbasa ozi mmekọrịta.
Ụgbọ mmiri Shiponi
Nnukwu nnukwu nnukwu chapeau.
Nakwa maka ime ka m chịa ọchị n'isi m.
Daalụ @ twitter-16882886: disqus!
Gremlin nke Astro
Douglas, ụzọ kachasị mma iji kọwaa ekele m maka edemede a bụ obere akụkọ. N'otu oge, a na m agbanye ngwá ọrụ na Twitter wee hụ aha a dị ịtụnanya, “Achọghị m ịnụ Akụkọ Gị. Ya mere, m gụrụ isiokwu ahụ ma chịa ọchị. M wee biri ndụ obi ụtọ mgbe ọ bụla.
@AstroGremlin: enwere ekele dị ukwuu! 🙂
Akụkọ ndị magburu onwe ha, mana anyị nọkwa na ụwa ebe a na-anụ ụda na mkpụrụedemede 140. Nhọrọ otutu uzo bara uru. Edemede m na nso nso a nke sitere na Rupert Bear cartoons, ya na ihe osise, abu na prose, diri umu m nma. Dịka ọmụmaatụ, ibe ọdịda dị ogologo, dị mma maka SEO yana ụfọdụ ndị na - agụ ya, mana vidiyo na mmalite 'ịzụta-ugbu a / nzọụkwụ ọzọ' na-enye ụzọ ụzọ igodo ndị ọzọ.
@markstonham: disqus M ka huru nnomi anya ogologo… ma dika ikwuru, nhọrọ di nkpa. Daalụ!
Agencylọ Ọrụ Hoffman
Sep 1, 2012 na 5:36 PM
Ọ bụ ihe ịtụnanya na mmadụ niile nwere okpukpe a na-akọ n’akụkọ.
Kama ịkọ akụkọ, enwere ihe ị ga-ekwu maka itinye usoro ịkọ akụkọ na nkwukọrịta azụmahịa.
Ọ bụrụ na iwepu ihe a n’isi, ọ bụ maka iji asụsụ were mee ka mmadụ lebara ya anya ma ọ bụ ka ọ masịa gị. O doro anya na nkwukọrịta nke na-adaba na quadrant na-adịghị agwụ agwụ na-emepụta mmeghachi omume na njedebe nke ọzọ nke ụdịdị ahụ.
Aga m arụ ụka na isi okwu gị na-eji usoro ịkọ akụkọ banyere ịme ọnọdụ megidere iwu.